जीवनशैली Archives - Bagaicha.com
बिगत १ बर्ष देखि हङकङको परिवेश आन्दोलनले गर्दा तनावग्रस्त रहिआयो । हङकङ सरकारले सुपुर्दगि बिधेयक पारित गरेपछि उक्त बिधेयक खारेजको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलन चर्केर गएपछि सरकारले उक्त बिधेयकलाई फिर्ता लिनुको सट्टा मृत घोषणा गर्यो । यसपछि आन्दोलन झन चर्केर गयो । दिनानुदिन आन्दोलनको स्वरूपले उग्ररूप लिएपछि आन्दोलनकारीद्वारा सडक अवरोध, आगजनि र तोडफोड हुनका साथै सरकारपक्षबाट अ...
गत आईतबार तथा २१ जुलाईको दिन सुनुवार समाज हङकङको बिषेश मिटिङ तथा साउने सक्राति भेटघाट भनेर बगैंचा रेष्टुरेण्टमा भेला भएका थियौं । वान्चाईको मेरो बसाई, भेटघाट जोडनस्थित बगैंचा रेष्टुरेण्टमा, समुन्द्र तरेर जानै पर्ने अवस्था र बाध्यता । मेडम रबिना र म हस्याङ फस्याङ गर्दै निस्कियौं कोठाबाट । आईतबारको दिन, हङकङको आन्दोलन जुलुसको लफडा । हेनेसी रोड र लोकहार्ट रोड दुबै सडकमा गाडिहरू गुडेका थिएनन् । एमटिआर...
हिमाली भेगभन्दा मुनी समथर खर्कहरुमा याक, चौरी, भेडाका वथानहरु प्रशस्त्र देख्न सकिन्छ । हिमालको काखमा रमाइरहेका याक, चौरी र लावालस्कर हुरुरु हिडिरहेका भेडाहरुको हुलले मनै लोभ्याउछन् । नेपालमा कामको आधारले जाती समुदाय चिनाउने प्रचलनले होला, याक र चौरीको गोठालो शेर्पा, भोटे र भेडाका गोठालो गुरुङ । गुरुङ समुदायको मुख्य पेशाको रुपमा रहेको भेडिगोठ संस्कृतिलाई जिवन्त राख्न भेडिगोठाले चलचित्र निर्माण भएको...
संघर्षले जिउन मात्र सिकाउदैन, जिवन र जगतको समेत ज्ञान दिन्छ । जसले जीवनलाई जिवन्त वनाउछ । चाहे त्यो समाजसेवा वा व्यावसाय नै होस । यसका एक साक्षी हुन् दिपा लक्सम । अनेकौ हण्डर ठक्करहरु उनका लागी आफुसंगै हिड्ने छाँया बनेर आए । पान्थरको विकट गाँउ हालको यान्वरक गाउपालिका (नागी) देखि काठमाडौं छिरेपछि कलेजमा शुल्क तिर्ने पैसा नभएपछि दिउसो पढ्न जाने राती डल बनाएर पसल पसल पुर्याउथे । उनले डल बनाउन आफुसंंग...
बैशाखदेखि शिक्षण अस्पतालमै कलेजो प्रत्यारोपण………….
९ फागुन, काठमाडौं । जतिबेला डा. रमेशसिंह भण्डारी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपणको योजना बुनिरहेका थिए, धेरैले नाक खुम्च्याउँदै शंसय व्यक्त गर्थे- नेपालमै ? त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा ? नेपालका सरकारी अस्पताल र त्यहाँ पाइने सेवा सुविधाबारे आम मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने योजना पत्यार नलाग्नु स्वभाविकै थियो । तर, करिव ३ वर्षको प्रयासपछि ...
‘काठमाडौंमा कति दिनपछि मास्क लगाउन पर्दैन भनेर फोन आइरहेको छ’
०६ फागुन २०७४, काठमाडौं – प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीपछि चर्चाका आएका लालबाबु पण्डितलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले फेरि आफ्नो क्याबिनेटमा भित्र्याए। त्यो पनि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा। त्यो पनि आकस्मिक उपहारका रुपमा। त्यसो त उनले यसअघि गृह मन्त्रालय पाए ५० प्रतिशत अपराध नियन्त्रण गर्ने बताउँदै आएका थिए। अपराध त उनले नियन्त्रण गर्छन नै, त्यो पनि वातावरणीय प्रदुषणको अपरा...
३ माघ २०७४ काठमाडौ विश्वमै खतरनाक मानिएको इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको छ । अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा.सुदीप खड्का सहित ११ वैज्ञानिकको टोलीले औषधि पत्ता लगाएको हो । ‘एन्टिभाइरल रिसर्च’ जर्नलमाका अनुसार इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको दाबि गरेको छ । डा.सुदीप खड्का नेपाल बागलुङका हुन टोलीमा खड्काबाहेक बाँकी सदस्य अन्य मुलुकका छन्। ...
काठमाडौ, मङ्सिर २ गते । मानिस तथा पशुपन्छीको उपचारमा प्रयोग हुदैआएको 'एण्टिमाइक्रोबियल' उपचार विधिप्रति सचेतना जगाउन राजधानीमा सप्ताहव्यापी विविध कार्यक्रम गरिएको छ । 'एण्टिबायोटिक्स उपचारः पुनर्विचार' नारासहित मनाइएको कार्यक्रममा शनिबार सचेतना र्‍याली आयोजना गरिएको छ । 'एण्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स' को क्रमिक वृद्धिले पशु र मानव स्वास्थ्यका साथै वातावरणीय रुपमा गम्भीर असर पारिरहेकोले सो...
धेरैको निम्ती टाउको दुखाईको बिषय हो, पुट्ट पेट । यस्तो पेटले शरीर भद्दा र असुहाउँदिलो देखिन्छ । लुगा लगाउँदा पनि पेट लुकाउनै सास्ती हुन्छ । असुहाउदिलो पेट कसरी घटाउने त ? कोहि जिम धाइरहेका छन्, कोहि दौडिरहेका छन् । यद्यपी खानपान र शारीरिक क्रियाबीच सन्तुलन नमिल्दा पेट बढेको बढ्यै छ । जथाभावी खानेकुरा खाने र त्यस अनुरुप शारीरिक क्रिया नगर्दा पेटमा अतिरिक्त बोसो जम्न पुग्छ । यसले शरीरलाई अस...
कहिले कहिँ खाना खाइरहेको बेला हामीलाई थाहा हुँदैन कि, हामीले कति खायौं, के खायौं ? रोगको कारण यही नै हो । भनिन्छ, विश्वमा खान नपाएर होइन, खान नजानेर धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । खान नजानेरै हो, रोगी भएको पनि । के भनिन्छ भने, तमाम रोग पेटबाट सुरु हुन्छ । यदि पेट स्वस्थ्य भयो भने समग्र रुपमा हामी स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुन सक्छौ । अतः पेटलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि अतिरिक्त औषधी खाइरहनु पर्दैन,...
अहिले बजारमा थरीथरीका साबुन छन् । कुन साबुनले नुहाउने ? यसको खास हेक्का गर्दैनौ । हेर्दा राम्रो साबुन छनौट गर्छौं । कतिले सस्तो खोज्छन्, कसैले महंगो । कोहि साबुनको ब्रान्ड हेर्छन्, कोहि त्यसको आवरण । वास्तवमा सावुन धेरै रंग, फ्लेवरको हुन्छ । यसरी सावुनमा विविधता हुनु भनेको त्यसको प्रकृति पनि फरक हुनु हो । अर्थात कुन किसिमको छालामा कस्तो साबुन प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसैले साबुन प्रयोग गर्न...